Somaliland: Nicholas Kay kalama hadlin arrimo siyaasadeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland: Nicholas Kay kalama hadlin arrimo siyaasadeed
A warsame 25 August 2014 25 August 2014
Mareeg.com: Wasaaradda Arimaha dibadda maamulka isku magacaabaya Somaliland, ayaa war-murtiyeed ay ka soo saartay socdaalkii Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay dhawaan ku tegay Hargeysa ku sheegtay inaan lagala hadlin arrimo siyaasad la xiriira iyo Xafiis uu Mr. Kay ka furanayo Somaliland.
Warmurtiyeedka Wasaaradda khaarajigu waxa uu u dhignaa sidan:-
“Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Jamciyadda Quruumaha ka dhexaysa, Nicholas Kay, ayaa booqasho lagu marti-qaaday ku yimi Somaliland toddobaadkii la soo dhaafay, casuumaddaasoo uu u fidiyey Wasiirka Arrimaha Debedda ee Somaliland Maxamed Biixii Yoonis. Sababta marti-qaadka, ayaa ku salaysanyd in bog cusub loo furo xidhiidhka Somaliland ay la leedahay Jamciyadda Quruumaha ka dhexysa (UN).
Somaliland waxay Wakiilka gaarka ee Xoghayaha Guud ee Jamciyada Quruumaha ka dhexaysa kala hadashay arrimaha horumarinta, baniaadamnimada iyo qodobo kale, mana jirin wax la xidhiidha siyaasada Somalia oo Somaliland kala xaajootay Kay, sida niidaamka Federaaliga ah ee Somalia,Taas oo aan ahayn arrinta u taala Jamhuuriyada Somaliland. Waxay kaloo Wasaarada Arrimaha Debedda ee Somaliland cadaynaysaa , in aan Nicholas Kay laga hadlay, haba yaraatee, in hayadiisu Xafiis ka furanayso Somaliland.
Labada geesoodba waxay ku niyadsan yihiin in booqashadaasi furi doonto socdaallo kale oo ay Nicholas Kay iyo Asxaabtiisa UN ku yimaaddaan Somaliland. Intii uu Hargeisa joogay, Kay, wuxuu la kulmay Wasiirro Xukuumadda ka tirsan, Wakiillada Baarlamaanka, Bulshada Rayidka ah, dad ka socda Gobolada Bari iyo xubno axsaabta mucaaradka ka tirsan.
Nicholas Kay, wuxuu Xukuumada Somaliland u xaqiijiyey in Xafiiskiisu uu si buuxda ugala shaqaynaayo Somaliland xagga nabadda iyo horumarinta, iyadoo diiradda la saaraaayo qodobbada horumarinta iyo ammaanka.
Nicholas Kay iyo wefdigiisii waxa warbixino kooban laga siiyey meelaha ay Somaliland wax-qabadka uga baahan tahay iyo in la Caddeeyo lana tilmaamo horumarka weyn ee muuqda oo ay Somaliland meelo badan ka gaadhay, taas oo ay ka mid tahay nabada iyo amaanka.”
Sawirro: Muungaab iyo Jeneraal ka tirsan Amisom oo isla buneystay